Esi elekere ndụ roulette
Really chọrọ n'ezie ịma etu esi ekiri online roulette? Gụọ na-achọpụta na atụmatụ nke Roulette Clock Master, nanị software site ThatsLuck!
Ntọhapụ mbụ nke a roulette clocking ngwá ọrụ malitere kemgbe ọtụtụ afọ gara aga, mgbe cha cha chara n'ịntanetị nke mbụ kwere ka ndị egwuregwu nwee nzọ mgbe croupier tụbara bọọlụ ahụ.
Ebe m na-agụkarị mmasị na isiokwu dị na amụma ọhụụ ma ọ bụ nke akụrụngwa, yabụ m kpebiri ịnwale aka m na ngalaba egwuregwu a, na-eke ngwanrọ maka ịdebe roulette na ntanetị nke m kpọrọ Roulette Clock Master.
Esi elekere online roulette na Roulette Clock Master
Karịa elekere, Roulette Clock Master ọ bụ ụdị oge, nke na-anwa ịkọ ebe bọọlụ nke croupier tụbara ga-akwụsị ịgba ọsọ ya ma ọ bụ site na ịfụ ikuku agbakọrọ na ikpe nke akpaka roulettes.
Kedu ka mmemme ahụ si kwuo nke a? Enweghị ike iji usoro a nke mkpuchi roulette na-agụta na a kpọmkwem n'ihe nke gbapụrụ ọsọ nke roulette na obi ụtọ n'ihi na teknuzu adịghị ike ejikọrọ na nnyefe site na netwọk nke video iyi, M kpebiri na m ịmụta a ụkpụrụ nke empirical visual mmesho a posteriori.
Ọ bụrụ na m gbochie vidiyo mgbe obere elekere ole na ole site na mwepụta bọọlụ ahụ wee hụ ọkwa nke roulette, bọọlụ na nọmba mmeri, oge ọ bụla m kwụsịrị vidiyo ahụ n'otu oge ahụ achọpụtara m ọnọdụ ndị yiri nke ahụ edere na mbụ, Enwere m ike ịtụ anya na nsonaazụ ikpeazụ bụ otu ma ọ bụ n'ọnọdụ ọ bụla yiri (igbe dị n'akụkụ) na nke achọpụtara tupu?
Azịza ya, mgbe ọtụtụ ule nyochachara, ee bụ: ọ dị obere ma ọlị Roulette Clock Master, n'ụzọ dabara adaba, akọwaala nke ọma ọbụlagodi otu mmeri.
Ya mere, olee nsogbu? Kedu ihe kpatara na anọghị m na Bahamas ruo ogologo oge ịppingụ champeenu na caliente playa? Aga m akọwara gị ya na paragraf na-esonụ.
Etu esi elekere online roulette na ikuku ejiri
Na-ekwu okwu nke abịakọrọ ikuku roulette, na ngwa anya mkpuchi roulette ha bụ n'ezie ndị kachasị mma ịbịaru nso, ma maka oge nke sekọnd dị maka ngosipụta, na maka ọhụhụ na nhazi nke diski na-agbagharị.
Agbanyeghị, a na-ejikọ roulettes a na ngwaọrụ akpọrọ RRS, ma ọ bụ Random Rotor Speed.
Nke a RRS na-agbanwe agbanwe nke rotor na-enweghị usoro ozugbo emechiri nzọ, iji zere na mmadụ nwere ike iji ohere ịme ịkụ nzọ mgbe ịmalite bọl ahụ.
E gosipụtara nhọrọ ahụ n'ụzọ doro anya na broshuọ nke onye nrụpụta nke ọtụtụ n'ime roulettes ndị a (ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, chọọ net ►Cammegh èbè).
Gịnị mezie? Enweghị olileanya maka onye ọkpụkpọ ahụ?
Aga m ekwu na tupu ebulie ọkọlọtọ ọcha na roulettes ndị a, ikekwe ụfọdụ nyocha ubi ga-enyocha, kwa n'ihi nke ọhụrụ Roulette Clock Master kwadebere ya na nhọrọ Betgba ọsọ ọsọ, ekele nke ọ ga-ekwe omume ịchọta na ọsọ kachasị nnukwu mpaghara nke wiil ahụ, nke nwere ike ịnwekwa ọdịiche dị na nsonaazụ ikpeazụ nke Random Rotor Speed ​​kpatara.
Na airball roulette, agbanyeghị, na-eji nlezianya eme ihe mgbe niile, ọ pụtaghị na arịa ndị na-ere ahịa gafere naanị ịbelata rotor.
Mbido Video na Speed ​​Bet
Maka ntọlite ​​nke Speed ​​Bet m na-ezo aka na post ma ọ bụ vidiyo na ► YouTube ngwanrọ ► Roulette Turbo Clicker, na omume usoro ahụ bụ otu ihe na ọ dị ezigbo mfe ma dịkwa ngwa iji mezue.
Banyere nhazi mbu nke vidiyo ahụ, mepee tebụl egwuregwu ahụ, họrọ aha windo egwuregwu ahụ site na menu ndọpụta wee pịa bọtịnụ ahụ. Nịm, wee nwee ekele na njikwa ihe X / Y ị nwere ike ịmata akụkụ nke vidiyo ị nwere mmasị ijide (X Bido e Y Bido) na nha nke window ejide (ogwe Weghara Size).
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwekwara ike 'ịmanye' nha nke windo egwuregwu ahụ iji mee ka ọ dabara nha nke desktọọpụ gị (panel Nha Egwuregwu Window).
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụgodị na mgbe mbido mbụ nha windo ahụ kwesịrị ịgbanwe, ịnwere ike iji otu pịa bọtịnụ ahụ Tweak weghachite ya na nha ahọrọ ahọrọ (Obosara / Elu).
Usoro nke amụma ngwaọrụ
Banyere usoro enwere ike (na ọtụtụ) nke amụma amụma, ọ bụ ezie na m na-eleba anya na ọhụụ nke vidiyo ndị m na-agaghị ada ịmepụta na biputere na ► YouTube, Echere m na ọ bara uru ịtụ anya ihe.
Etu esi elekere online roulette: ihe nrịba ama roulette
Roulette Clock Master a kwadebere ya na akara 2 nke akara ngosi dị iche iche, aha ya bụ # 1 na # 2.
The # 1 usoro akara bụ n'ámá ndị a gụrụ site na 1 ruo 6 na obere okirikiri okirikiri, gbakwunyere nke na-acha anụnụ anụnụ. Enwere ike ịdọrọ ha na ihuenyo ma jiri ya mee ihe atụ, dịka ọmụmaatụ, mpaghara 6 nke wiil ahụ, ebe enwere ike iji okirikiri mata lozenges dị iche iche, nke ahụ bụ isi mmetụta nke bọọlụ tupu ọ daa na rotor.
Akara ọcha ndị a nwekwara ike gbanwee ndụ ndụ, pịa ha na oke.
A na-eji akpa akara mbụ a kee chi ngalaba nyocha n'ihi na mgbe ị ga-edeba aha na o doro anya na m nwere ike ikwu na ị nyochaa mgbe niile na-eso a homogeneous katalọgụ, dabere na ntụziaka nke ntụgharị gburugburu elekere / na-agagharị nke wiil.
Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-aba uru ịmara na ọ bụrụ na nkwụsị nke ngụ oge bọọlụ ahụ dị nso na ntụpọ edo edo (lee foto gara aga), efu (iji chọpụta ọnọdụ nke wiil ahụ) na ngalaba nke akara akara 2 -1 na nọmba mmeri (na-eche na nke 19 bụ nke a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) n'akụkụ akara 01, n'ihe banyere ngwakọta bọọlụ / ụkwụ yiri ya, ị nwere ike iche maka ịkụ nzọ mpaghara nke nọmba 12 sitere na 3 ruo 34 ma ọ bụ na nke ọ bụla ikpe nke nọmba na nkwụsị ahụ ga-agwa gị foto na oge nkwụsị Ngụ oge.
Etu esi elekere online roulette: ngụ oge
Ma ngụ oge, dị nnọọ tinye chọrọ oge ke kpọmkwem igbe na pịa bọtịnụ Malite ịmalite vidiyo na elekere nkwụsị.
Mgbe ị ruru uru egosiri, vidiyo ahụ ga-akwụsị ịhapụ gị ka ị ghọta ebe bọọlụ na wiilị ahụ dị wee gbanwee ya.
A na-arara usoro ihe nrịba # 2 dum maka ịdebe bọl / wheel / nọmba mmeri.
N'ezie, ha bụ akara nke ụdị na agba dị iche iche iji nye gị ohere ịhọrọ ndị masịrị gị dịka o masịrị gị.
A na-eji otu agba dị iche iche nke akara 3 mee ka otu ọdịiche dị na nke ọzọ.
Na isi, ọ bụ maka ịme nke a: ozugbo ị kwụsịrị vidiyo nke ntụgharị, dịka ọmụmaatụ na ntụgharị ihu igwe, ị na-etinye akara na bọlbụ, otu na efu nke wiil ahụ na otu na ọnụ ọgụgụ nke na-emeri mgbe ahụ.
Tinyegharịa ọrụ ahụ maka oge 3 ma ọ bụ 4 ọzọ wee malite igwu egwu, na-achọ naanị ma ọ bụrụ na nkwụsị vidiyo ahụ enwere ọnọdụ yiri nke ahụ edere na ọnọdụ nke bọl / wiil.
N'ezie ha dịkwa usoro egwuregwu ndị ọzọ, dị ka ịchọrọ na mpaghara nke nọmba isii nke kachasị emetụta na nkwụsị nke vidiyo, ma ọ bụ nke ọzọ, ya bụ, na-egwu egwu megide mpaghara oyi (anaghị akụ), ha niile iji gbochie usoro nke ikwughachi nke na-ebupụta na ụfọdụ croupiers ha na-enweghị ike iwepụta; n'aka nke ọzọ chee echiche ... ọ bụrụ na onye na-ere ahịa dochie anya na nkezi ọ bụla 30 nkeji, a ga-enwekwa ihe kpatara ya!
Ikpeazụ n'ókè nke roulette clocking?
Na ụdị ọhụụ a Roulette Clock Master Etinyego m ọnọdụ nha ọhụụ.
Na omume site na ịpị bọtịnụ DS (Ntinye aka Dealer), mmemme a na-egosi Speed ​​Bet na otu panel nke nwere roulettes 12 (Oge 01, Oge 02, wdg).
Usoro bụ nke a: mbụ g'ẹphe ha nkezi ugboro nke a otutu, nke ahụ bụ ịghọta mgbe ole milliseconds si igba egbe nke bọl video ga-akwụsị, n'ụzọ dị ka nwere 'dịkarịa ala' ọzọ 2 sekọnd nzọ tupu ọgwụgwụ nke ịkụ nzọ.
Ozugbo emere nke a, họrọ nke nke 12 roulettes nwere etiti kachasị mma ma họrọ wiil dabara adaba na pịa.
N'ebe a, ntọala ahụ ezuola, bido ịmalite oge na oge ọ bụla vidiyo ahụ kwụsịrị, nzọ na mpaghara yiri nke ahụ nke akwụkwọ ntụnyere nke ị họrọburu n'etiti ndị 12 dị
Ọrụ ahụ dị mfe karịa ka ọ nwere ike iyi, ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla, a na m akpọku gị ka ị lelee vidiyo ngosi ngosi ahụ adịlarị na channel ► YouTube di ThatsLuck.
Ọhụrụ Roulette Clock Master ọ bụ niile intents na nzube a laabu na, dị ka ndị dị otú ahụ, ọ na-enye gị ezigbo ekwe omume nke echepụta na itinye kpamkpam ọhụrụ emeri usoro, na-enweghị bụchaghị ịkekọrịta ha; site na ebe a, dịka ị ga-aghọta, ọ na - enweta uru akụ na ụba dị iche na nke sọftụwia ndị ọzọ niile dị.
Ọzọkwa, ekele ụdị mmemme eji, a software maka ruleti Ochie ọ ga-arụ ọrụ ruo mgbe ebighi ebi, n'ihi na ọ na-emekọrịta ihe na ihuenyo ọkpụkpọ ma ọ bụghị na koodu sọftụwia cha cha.
Nbudata Nbudata	ClockMaster.zip - 2 MB